Fumana iPoco M3 Pro ngexabiso elifanelekileyo ngale ntengiso yokwazisa | I-Androidsis
Fumana iPoco M3 Pro ngexabiso elifanelekileyo ngale ntengiso
UDaniPlay | 20/05/2021 09:16 | Ukuhlaziywa ukuba 20/05/2021 14:04 | Iiselfowuni
I-Pocophone iye yaba ngumvelisi kunye nezixhobo ezininzi kwimarike ekufuneka ithathelwe ingqalelo ekusebenzeni kwazo zonke. Enye yezinto zamva nje yiPoco M3 Pro, I-smartphone ebalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa ufuna ukungena ngokupheleleyo kuluhlu oluphezulu oluphakathi.
IPoco M3 Pro yifowuni ye-5G enezinto ezibalulekileyoPhakathi kwazo kukho iprosesa enamandla kunye nento ebalulekileyo, ibhetri yi-5.000 mAh. Sisiphelo sendlela ekufuneka siqwalasele ukuba ixabiso libalulekile kwaye ithembisa ukunika inkululeko imini yonke ibona ukusetyenziswa kwayo kancinci.
1 Ungalusebenzisa njani unikezelo lwePoco M3 Pro
2 Incinci iM3 Pro, isixhobo se5G
3 Umthamo webhetri ephezulu
4 Ikhamera engemva kathathu
5 Unxibelelwano kunye nenkqubo yokusebenza
Ungalusebenzisa njani unikezelo lwePoco M3 Pro
Ukunyuselwa kuya kuhlala iiyure ezingama-48 kuphela, Ukuqala nge-20, ke kuya kufuneka uyisebenzise ngokukhawuleza ukuze uthenge iPoco M3 Pro yakho entsha ngale ntengiso. Ikhowudi yokwazisa ekufuneka uyingenisile kwiAliexpress yile TSESLC12 kwaye uyakufumana isaphulelo se- $ 10 (€ 8,40).
Ukuba uhlala eRussia, unokufumana izibonelelo kwi- ikhuphoni lesibini elongezelelweyo Iya kuphelelwa lixesha kwiiyure ezingama-24 (Oko kukuthi, ngoMeyi 21): UKUFUMANA, kodwa njengoko sisithi idilesi yakho kufuneka ibe yeyaseRussia.
Sebenzisa eli thuba kwaye usebenzise ikhuphoni lakho kule khonkco ilandelayo:
> Fikelela kunyuselo lweAliexpress apha
Incinci iM3 Pro, isixhobo se5G
Phakathi kwezibonelelo zayo kukuba iyifowuni yesihlanu, Inika ubungakanani be-chip ye-700 ebonelela ngoqhagamshelo lwe5G. Umvelisi unale nkxaso, enika amandla amandla kwi-terminal xa usebenza kunye nokusetyenziswa kwesicelo kunye nemidlalo.
I-GPU yi-ARM Mali-G57 MC2, iza ngokudityaniswa kwiprosesa yeDimension 700 kwaye ikunike amandla okuhamba ngokupheleleyo, enkosi kwi-RAM ebandakanyiweyo, ekunokuthi kule meko kube kukhetho oluninzi. Imodeli yokuqala yi-4 GB yememori ye-LPDRR4X, ngelixa yesibini i-6 GB.
Sele kwisicwangciso sokugcina unokukhetha phakathi kweendlela ezimbini onokukhetha kuzo, ukhetho lokuqala luyi-64GB, okwesibini liphindwe kabini nge-128GB UFS 2.2. Ine-slot ye-MicroSD, ke iya kubonelela ngokukhula ukuba ufuna indawo engaphezulu yeefoto, iividiyo kunye namaxwebhu.
Umthamo webhetri ephezulu
Elinye lamandla ngaphandle kokuba yi-5G ibhetri ibandakanyiwe njengomgangatho, iba yi-5.000 mAh, eyoneleyo ukuhlala yonke imini ngaphandle komzamo omncinci. Yibhetri esele yenziwe ukuba ihlale ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ngaphandle kokuqaphela umzamo ngezicelo ezisisiseko zemihla ngemihla.
Intlawulo yebhetri yi-18W, ihlawuliswa ukusuka kwi-0 iye kwi-100% ngaphezulu nje kweyure, ngelixa kuhleli kuyacetyiswa ukuyibiza ngaphezulu kwe-20%. Incinci M3 Pro enkosi kwiDimension 700 ayizukusetyenziswa kakhulu kwaye ayizukuhlawuliswa ngaphantsi kosuku olupheleleyo.
IPoco M3 Pro 5G ineenzwa ezine, ezintathu ngasemva kwaye enye ngaphambili ithatha ii-selfie ezilungileyo xa uthatha imifanekiso naphina. Ikhamera ephambili engasemva zii-megapixels ezingama-48, eyesibini yi-2 megapixel macro, kwaye eyesithathu yi-2 megapixel sensor sensor.
Sele ngaphambili isongelwe kwi-8 megapixel selfie sensor, umgangatho wokugqibela wanele ngokwaneleyo ukuthatha imifanekiso elungileyo, urekhode ividiyo kwinkcazo ephezulu kunye nakwinkomfa yevidiyo. Kwaye yongeza i-AI yokucaca ngamaxesha afunekayo.
IPoco M3 Pro 5G inonxibelelwano oluninzi xa uqhagamshela, kubandakanya umzekelo ukubhabha kwi-Intanethi enkosi kwi-5G 5G NSA / SA yokunxibelelana. I-chip iya kunyusa isantya sokusebenzisa inqanaba ledatha kuyo nayiphi na inkampani ebonelela ngesicwangciso sedatha yesizukulwana sesihlanu.
I-5G ibandakanya ukunxibelelana kwe-Wi-Fi, iBluetooth 5.1, NFC, iDual SIM, GPS, IR sensor (Infrared) kwaye yongeza ne-3.5 mm jack. Ukuvula ifowuni kungasemvaUkwenza oku, kuya kufuneka uyiqwalasele ukuba ifowuni iqale ngamanyathelo ambalwa njengoko isenzeka kwizixhobo ezahlukeneyo.
Inkqubo yokusebenza ihlaziywa kuhlobo lwamva nje, ngakumbi i-Android 11 ngohlaziyo lwamva nje lwenyanga ka-Epreli. Uluhlu olusetyenziswa nguPoco M3 Pro 5G yi-MIUI 12 ye-POCO, ebonelela ngeempawu ezininzi zeetheminali zenkampani yeXiaomi, nangona zinembonakalo eyahlukileyo.
ENCINANE M3 Pro
ISIKHUMBUZO I-6.5-intshi epheleleyo ye-HD + IPS LCD / 90 Hz yokuhlaziya inqanaba / Iglasi yeGorilla 3
INKQUBO Ubungakanani beMediaTek 700
GPU I-ARM Mali-G57 MC2
ISithuba sangaphakathi esigciniweyo I-64 / 128 GB UFS 2.2
IKHAMERA EMVA I-48 MP f / 1.79 isivamvo esikhulu / 2 MP isivamvo esikhulu / isivamvo sobunzulu esiyi-2 MP
IKHAMERA ENGAPHAMBILI I-8 MP f / 2.05
IBATTERI I-6.000 mAh ene-18W yokutshaja ngokukhawuleza
INKQUBO YOKWENZA I-Android 11 ene-MIUI 12 yePOCO
UQHAGAMSHELWANO I-5G / WiFi / iBluetooth 5.0 / GPS / 3.5mm Jack / Dual SIM / IR woluvo / i-USB-C
IIMPAWU ZE-OTRAS Icala lesandla seminwe
Ubungakanani kunye nobunzima: 162.3 x 77.3 x 9.6 mm / 190 amagremu
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Fumana iPoco M3 Pro ngexabiso elifanelekileyo ngale ntengiso
Ezona zicelo zibalaseleyo zokujoyina iividiyo kwi-Android